बन्दा बन्दिमा अनिन्द्राले सतायो ! कसरी मुक्ति पाउने ? गोपाल ढकाल, मनोविद - Nippon Samachar.com No 1 News Portal from Nepal in Japan
बन्दा बन्दिमा अनिन्द्राले सतायो ! कसरी मुक्ति पाउने ? गोपाल ढकाल, मनोविद
2020 Jun 03 Tweet
लकडाउन शुरुभएपछि निदाउन गार्‍हो हुने , निदाइ हाले पनि बिच बिचमा निन्द्रा टुटिरहने , बिहान चाडै निन्द्रा खुल्ने र फेरी निदाउन कठिन हुने जस्ता सिकायत लिएर धैरे ब्यक्तिहरुले मनोपरामर्शका लागि फोन गर्न थालेका ।
बन्दाबन्दी पछिको समयमा अनिन्द्राको समस्या बढेर गएको देखिन्छ ।
कोरोनाको संकट तथा बन्दा बन्दिले मानिसको जिवनशैलीमा परिबर्तन आएकोछ । ब्यक्तिको दैनिक क्रियाकलाप, खानपान, यौन जिवन, निन्द्रा जस्ता कुरामा पनि उतारचढाव ल्याएकोछ । जीवनकालागि खानापान जति आवश्यक हुन्छ, उत्तिनै निन्द्राको पनि आबस्यकता पर्दछ।
निन्द्रा पनि मानिसलाई नभई नहुने अति आवश्यकता मध्येको एक हो ।
शारिरिक तथा मानसिक रुपमा स्बास्थ्य रहन प्रयाप्त निन्दाको जरुरत पर्दछ।
निदाएको अवस्थामा मानव शरीरका सबै प्रणालीहरूको नवीकरण हुन्छ। यसले हाम्रो शरीर र मस्तिष्कलाई विश्राम मिल्छ।
जब हामी निदाउँछौ शरीरले विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्छ। त्यसैले बिहान उठेपछि हल्का र फुर्तिलो अनुभव हुन्छ ।
प्रयाप्त निन्द्रा नपुग्दा टाउको दुख्ने, थाकेको महसुस हुने ,खाना खान मन नलाग्ने, तनाब हुने, काम गर्न जोश जागर नहुने साथै झर्को लाग्ने , चिटचिटाहट बढने स्मरणशक्ति कम हुने , रिस उठने , छट्पटी हुने हुन्छ।जसले दैनिक जिवनमा नै अवरोध निम्तिन्छ।अनिद्राले जीवनको गुणस्तर घटाउछ । पर्याप्त नसुत्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत घटेर जान्छ ।
अनिन्द्राको समस्याले अल्जाइमर्स (डिमेन्सिया, मुटु र धमनीसम्बन्धी रोगहरू, जस्तो उच्च रक्तचाप तथा हृदयाघातको सम्भावना बढछ । मधुमेह,पेटको समस्या ,मोटोपनको जोखिम बढछ । यसले स्नायु प्रणालीलाई कमजोर बनाउनुका साथै डिप्रेशन, एन्जाईटी तथा अन्य मानसिक समस्या निम्त्याउन सक्छ।
अनिन्द्राको समस्या आफैमा एउटा रोग पनि हुनसक्छ। वा शारीरिक तथा मानसिक रोगको एउटा लक्षणका रुपमा देखा परेको पनि हुनसक्छ।
अनिन्द्राको कारण पत्ता लगाई सोहि अनुसारको समाधान खोज्नुपर्छ । निन्द्रा लागेन भनेर आफुखुशी अौषधि खानु भने हुदैन ।
बन्दा बन्दी पछि अनिन्द्राको समस्या देखिनुको कारण के के हुन सक्छन् ?
प्राकृतिक बिपति , रोगको संक्रमिण जस्ता कुरा मान्छेको बहसमा हुदैनन। कहिले देखापर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुदैन । त्यसको सामना गर्न मानसिक रुपमा ब्यक्ति तयार भएको पनि हुदैन । कोरोनाको संकट पनि एक्कासी देखापर्यो । नयाँ रोगले बिश्व भरि नै महामारीको रुप लिदा मानिसमा तनाब, डर , चिन्ता, उत्तेजना, आवेग बढेर जानु स्बभाविकै हो । जसले छोटो समयको लागि अनिन्द्राको समस्या ल्याउन सक्छ । प्रकोप कम हुँदै जादा अनिन्द्राको समस्या पनि कम हुँदै जान्छ। तर आफ्नो स्व हेरचाहमा भने ध्यान पुर्याउनु आबस्यक हुन्छ।
बन्दा बन्दी पछि हाम्रो दैनिक जीवनशैली र क्रियाकलापमा परिवर्तन आएकोछ । शारीरिक रुपमा हामी निष्क्रिय जस्तै भएकाछौ ।
खानपान र निन्द्राको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ ।
गलत खानपानले व्यक्तिको निन्द्रामा असर गर्न सक्छ ।
बिपत्तिको बेला खानपानमा पनि समस्या आउन सक्छ। खानेकुराको अभाब हुन सक्छ । स्बस्थ र पोषिलो खानेकुरा जुटाउन गार्‍हो पर्न सक्छ । तर पनि सकेसम्म खानपानलाई संतुलित बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ।
मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगमा अनिन्द्राको समस्या एउटा लक्षणको रुपमा देखिन सक्छ। पछिल्लो समय कोरोनाको संकटले गर्दा मानिसमा मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या बढेर गएको पाईन्छ ।
बिशेष गरि मानसिक आघात, डर-चिन्ता जन्य समस्याहरु तथा डिप्रेसन जस्ता मानसिक समस्या बढिमा देखिएकोछ ।
तनाब, डर-चिन्ता, डिप्रेसन तथा अन्य मानसिक समस्यामा मनमा धेरै कुरा खेल्ने, डर लाग्ने, छट्पटी हुने जस्ता लक्षणहरु देखिन्छन् । जसले निन्द्रामा अबरोध पुर्याउछ। यस्तो अबस्थामा मनलाई शान्त र एकाग्र बनाउने अभ्यास गर्नुपर्छ । गहिरो सास लिने र छाड्ने तथा अन्य आरामदायी अभ्यास गर्नु फाईदा जनक हुन्छ । तनाब ब्यबस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ।
यहाँहरुमा पनि यस्तै अनिन्द्राको समस्या वा अन्य मानसिक समस्याहरु छन भने लकडाउको अबधिभरि फोन मार्फत निशुल्क मनोपरामर्श सेवाक‍ो लिन सक्नु हुन्छ ।
जसको लागि मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रको हटलाईन न. ९८१३५२७७३२ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
लेखक ढकाल मनोविद हुन ।
उनी मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रमा कार्यरत छन ।
स्वास्थ्य - Jun 03
समाचार - Jun 03
नासाको उपग्रह डाटामार्फत समुन्द्रमा हुने सुक्ष्म प...